Akhriso:-Qashin Uruuriye Madaxweyne Noqday!
Waxa uu kusoo barbaaray nolol adag qoyskiisuna waxuu ahaa faqiir ama sabool, waxa uuna ka shaqeyn jiray qashin aruurinta si uu isaga dabaro ama isaga bixiyo qarashaadka waxbarashadiisa.
Markii uu dhameeyay waxbarashadiisa, waxa uu kamid noqday shaqaallaha yar ee shirkada “Hyundai Engineering and construction oo uu Mudo shan sanadood la shaqeynayay.
howlkar-nimadiisa shaqo, iyo dadaalkiisa waxqabad ayuu ku muteystay mudo yar in uu ku noqdo agaasimaha shirkada Hyundai oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida.
Markii uu ka shaqo bilaabayay shirkada Hyundia waxaa ka howlgalayay oo ka shaqeynayay 90 qof kaliya, halka markii uu ka tagayay jagada gudoomiyenimo ee shirkada oo uu shaqeynayey 27 sannadood ay ka howlgalayeen shaqaalo ka badan 160,000 oo qof.
Intaa kadib waxa uu ku biiray siyaasada mudo gaaban ka dibna waxa uu u istaagay in uu qabto hoggaanka madaxweynenimo ee wadankiisa Koonfurta Kuuriya si uu wax uga qabto dhibaatada haysta wadankiisa, waa uu ku guuleeystay, waxa uuna noqday mid ka mid ah madaxweyneyaashii ugu yaraa ee xilligaa soo mara caalamka.
Waqtigaasi wadankiisa waxa uu kamid ahaa Dowladaha sadexaad ee burburka iyo faqriga ay galaafteen.Wadanka uu taladiisa la wareegayna, waxa uu la daalaadhacayay dhibaatoyin fara badan mana jirin meel u badqabtay dalkiisa, waxaa isugu darsamay dhaqaalle xumo faqri iyo maamul xumo intaba.
Ninkan magaciisu waa Lee Myung-bak waana Madaxweynihii hore Koonfurta Kuuriya waxaana uu xilka hayay mudadii u dhaxeysay Bishii February 25-kedii Sannadkii 2008 illaa Bishii February 25-kedii Sannadkii 2013-kii.
Inta uusan talada wadankiisa la wareegin Lee Myung-bak Koonfurta Kuuriya waxa lagu tirinayey in ay kamid aheyd dowladaha calaamka ugu faqiirsanaa kontonkii sano ee u dambeeysay.
Mudadii yareeyd ee uu talada wadanka hayay waxa uu kusoo daray kontonka dowladood ee caalamka ugu dhaqaalaha badan taasina waxaa sabab u ahaa sida uu sheegay Madaxweyne Lee myung-bak in ahmiyada ugu weyn uu saaray dhanka tacliinta ama waxbarashada.
Waxaa kaloo la xusi karaa Mr Lee Myung-bak intii aanu noqon Madaxweynahan Konfurta Kuriya oo uu hoggaanka u hayay maamulka shirkada Hyundai engineering and construction waxa uu xaqiijiyay in uu ka dhigo mid wax soo saarkeedu sareeyo, sidoo kale shantii sano oo uu hayay hoggaanka talada wadankiisa waxa uu xaqiijiyay in uu kusoo daro wadankiisa dowladdaha ugu dhaqaalaha sareeyo caalamka, waxa ayna yeelatay awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo weyn.
“Madaxnimadu ka tiri meyso gacmaheyga, raadadkii iyo urtii qashinka ee aan kusoo shaqeeyay waana sababta aan inbadan ugu faraxsnahay waayaheygii shaqada illa maanta. sidaa waxaa yiri Madaxweyne Mr Lee Myung-bak.
Ugu dambeyn qashin-aruurintii uu ka shaqo bilaabay waxey naftiisa, qoyskiisa iyo wadankiisaba u yeeshay sharaf iyo karaamo weyn oo ay ku faannaan inta noloshadooda ka harsan.